Binance ဆန်းစစ်ခြင်း | အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုသိကြ Binance - က ISO
"Highly အကြံပြု Binance ချိန်း "
အလည်အပတ် Binance ယခု
Binance cryptocurrency လဲလှယ်များ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လဲလှယ်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
အတိတ်3နှစ်တွေနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို cryptocurrency လျှင်မြန်စွာအများပြည်သူမျက်စိအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနားလည်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုရရှိမှု, ကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ဖို့အသုံးပြုယခုနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာ cryptocurrencies နှင့်ဖလှယ်မှုများ၏ပိုပြီးအမျိုးအစားများမွေးဖွားရန်ရေပန်းစားကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက cryptocurrency codes တွေကို၏အစုံထဲကနေဖန်တီးအချက်အလက်များ၏တစ်ဦး string ကိုသို့မဟုတ်ငွေကြေးများထဲမှယူနစ်ဆိုလိုတစ် hash နဲ့ encrypt ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ cryptocurrency စီးပွားရေးကိုသာ peer-to-peer အင်တာနက်ပရိုတိုကောမှတဆင့်စောင့်ကြည့်ကြောင်းဒါကြောင့်ယခုကဲ့သို့အ cryptocurrency ကမ္ဘာတစ်လွှားအားလုံးအစိုးရကြီးကြပ်အခမဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
cryptocurrency ၏ဥပမာ Bitcoin, Ethereum, ဂယက်ထ, Dash, Dogecoin, Litecoin, Peercoin ပါဝင်သည်။
ဘယ်လို cryptocurrency သင်ကူညီသလဲ,
ဘယ်လိုလဲ Binance အလုပ်များ
ကျနော်တို့နှင့်အတူကိုဘယ်လိုစတင် Get Do Binance
သင်၏ငွေများလုပ်နည်း Binance အကောင့်
အဘယ်ကြောင့် Buy Binance ဒင်ျငါးငှေ
အတွက်မှတ်ချက်ဖို့အရေးကြီး Else ကဘာလဲ Binance ပလက်ဖောင်း
ခရက်ဒစ်ကဒ် Charged-ကျောနှိုင်းယှဉ်ပါက, cryptocurrency အရောင်းအမတရားဖမ်းဆီးပေးပို့သူအားဖြင့်ပြောင်းပြန်မရနိုငျ; ဒါကြောင့်လည်းကြောင့် cryptocurrency အသုံးပြုသူနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲကုန်သည်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသူမှသူသို့မဟုတ်သူမလိုလားအတိအကျအဘယ်အရာကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်တွန်းအားပေးတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်ကိုမှသူခိုးတွေကာကွယ်ပေးသည်။
ကုန်သည်တို့သည်စတင်ဘယ်မှာဆွဲနည်းလမ်းအပေါ်အကြွေးကတ်များ function ကို, သွားရမည်အကြောင်း
ဒါ့အပြင်အကြွေးကတ်များနှင့်တကွ, ကုန်သည်မသက်ဆိုင်ငွေပေးငွေယူသောငွေပမာဏ၏တန်ဖိုးသင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုအကြွေးလိုင်းအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ရရှိသွားတဲ့; ကန်ထရိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အနာဂတ်နေ့စွဲသို့မဟုတ်အချိန် 3rd ပါတီခွင့်ပြုချက်ပြင်ပအချက်အလက်များကိုးကား, ဒါမှမဟုတ်ပို့စ်ချိန်းတွေ့ပပျောက်သို့မဟုတ်ပေါင်းထည့်ရန်ပြဌာန်းနိုင်ဒါ cryptocurrency ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဒေတာဘေ့စများကဲ့သို့လည်ပတ်ကတည်းကကြောင့်ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်; သငျသညျကိုသာ download လုပ်ပါနှင့် / သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလဲလှယ်ပလက်ဖောင်းဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီခွင့်ပြုပါတယ်။
အသုံးပြုသူအချို့အတန်းအစား / အမျိုးအစား / အဆင့်စိစစ်အတည်ပြုမလိုအပ်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်စတင်မည်နိုင်မီတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်စိစစ်အတည်ပြုလိုအပ်သည်ရှိရာရိုးရာဖလှယ်မှုမတူဘဲ။ ယခု (အနာဂတ်၌အမှုမဖွစျစခွေငျးငှါ) အဘို့, cryptocurrency အတွက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပါဝင်ပတ်သက်မှသာအနည်းငယ်မျှသာအခကြေးငွေလည်းမရှိ။
ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလက်ခံနှင့်လက်ခံ start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီးကူးလူးဖလှယ်မှုနှင့်ငွေကြေးပေါ်ပေါက်ရေးလွယ်ကူအများပြည်သူ sign up ကိုရန်နှင့်စတင်ရန်အဘို့ငါဖြစ်စေမည်။
cryptocurrency နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှတဆင့် enabled ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဖောက်သည် cryptocurrencies အတွက်ကုန်သွယ်မှုမှခွင့်ပြုမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ် (DCE) ဖြစ်ပါသည်။
WEX, Kraken အမေရိကန်, CoinEgg, Bitstamp, GDAX အမေရိကန်, Bit-Z, Bitfinex ဟောင်ကောင်, Bits Blockchain, OKEX, Bithumb, Bittrex အမေရိကန်, Huobi, UpBit - ဒီနေရာမှာလူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုယနေ့တချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Binance ဖလှယ်မှု cryptocurrencies ၏ဖြစ်ပွားနေသောတိုးတက်မှုနှုန်းပစ်မှတ်အတွက်အရေးကြီးလှသည်။
သင်သည်အခြား cryptocurrencies သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာများကဲ့သို့ရိုးရာငွေကြေးနှင့်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်ကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပလက်ဖောင်းဟာဖလှယ်မှုထိုကဲ့သို့သောအရောင်းအထဲကကြေးဝင်ငွေအတွက်ဝယ်လက်နှင့်ရောင်းချသူကြားကဆက်သွယ်မှုကို enable ။
cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍတွေထဲမှာ cryptocurrency ခံယူပြဿနာ IOUs, Fiat, လုပ်ငန်းစဉ်အားအမိန့်စာအုပ်လက်ခံရရှိနှင့် IOUs ရွေးနှုတ်တော်မူရကြမည်။
အများစုမှာတက်ကြွ cryptocurrency ကုန်သည်များလဲလှယ်ထဲကပိုက်ဆံရွေ့လျားအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချိန်နှောင့်နှေးမှုကြောင့်ဖလှယ်အပေါ်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေကိုစောင့်ရှောက်။ ဒီအလှည့်ပလက်ဖောင်းလုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှု၏ကိစ္စများတွင်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်များဖို့ကုန်သည်များဖျောထုတျ။
ဒါက cryptocurrency စနစ်ယနေ့အဖြစ်မှန်သည်နှင့်ကျိန်းသေတိုးတက်မှုများနှင့်အရေးပေါ်အာရုံစိုက်မှုအတှကျအဓိကဒေသများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်သင်၏အအဖိုးတန် cryptocurrency သိမ်းထားဖို့ဖလှယ်သုံးပြီးကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာတရုတ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ်ခေတ်မှီ cryptocurrency လဲလှယ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကြောင့် Cryptocurrency အပေါ်တရုတ်ဥပဒေဂျပန်စစ်ဆင်ရေး၎င်း၏စင်တာပြောင်းရွှေ့။
ဒါဟာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာကနဦးအကြွေစေ့ဟာယပူဇော်သက္ကာသို့သော့ချက် (ICO ရဲ့) နှင့်ချောမွေ့စွာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ရှိရာပိုကောင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းဖွဲ့စည်းမှာပစ်မှတ် "အခြားတ crypto ဖလှယ်ဖို့ဘယ်လို" ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအ cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ဘဲအသစ်ဖြစ်၏ပေမယ်ကြောင့်၎င်း၏ဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေငွေပေးငွေယူအဖိုးအခအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကနဦးအကြွေစေ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကျော်ကြားမှုတွေအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
သငျသညျ cryptocurrencies သို့ဖြစ်လျှင်, သငျသညျအမြားဆုံးကုန်သည်များမှ Bittrex နှင့်အခြားကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကနေပြောင်းရွှေ့ပြီသတိထားမိပါလိမ့်မယ် Binance.
Binance cryptocurrency ကုန်သွယ်နှစ်ခုဟာယပူဇော်သက္ကာရှိပြီးအဲဒီအခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှကိုပထမဦးဆုံးအချိန် cryptocurrency ကုန်သည်ကိုက်ညီမှဖန်တီးထားကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများအဆင့်မြင့်ပေမယ် cryptocurrency ဖလှယ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်အပေါ်နောက်ခံအသိပညာရှိသည်သောသူသည်အသုံးပြုသူများမှဤမျှလောက်ပြဿနာတစ်ခုရှိုးသင့်ပါဘူး။
အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအကြားကွာခြားချက်ဟာအခြေခံဗားရှင်းသာမိမိတို့၏ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းနှင့်အမိန့်စာအုပ်များအပါအဝင်ဂရပ်များနှင့်ဇယားဖော်ပြပေးနေစဉ်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းတစ်ကာလအတွင်းနှစ်သက်တဲ့ cryptocurrency ရဲ့တန်ဖိုးကို၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်ကမ်းလှမ်း, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သစ်တစ်ခုကုန်သည်အဖြစ်, သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရမည်နှင့်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတငျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခံရမီသင့်အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်။ ဒါကအားလုံးအစဉ်အလာ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ၏ပုံမှန်တစ်ခုခုပါပဲ။
သင်တို့တွင်အသုံးပြုသူ account ဖန်တီးပြီးကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ် Binance မျှမျှတတလွယ်ကူသည်နှင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအကူအညီများမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုအနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 1BTC ၏နေ့စဉ်ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အဆင့်2များအတွက်အကောင့်စိစစ်အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်၏ 2BTC တင်သွင်းခဲ့တဲ့၏နေ့စဉ်ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဆင့် 100 ဘို့လိုအပ်ပါသည်
ခွင့်ပြုချက်အကောင့်မှကြိုတင်။ သင်တစ်ဦး Level2 အသုံးပြုသူတွေဟာနှငျ့သငျ 100BTC ကျော်လွန်ရုပ်သိမ်းလိုလျှင်ဆက်သွယ်ရပါမည် Binance အတည်ပြုချက်အတွက်။
အောင်မြင်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ဘို့ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်ယခုသင့်ရန်ပုံငွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ Binance အကောင့်။
အဆိုပါ Binance ပလက်ဖောင်း cryptocurrencies ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းပေမယ့် BTC နှင့် ETH ပိုမိုလူကြိုက်များကြသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သိုက် / ရုပ်သိမ်းရေးကို click ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆိုက်ရဲ့ထိပ်မှာရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ scroll ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါပေးပို့ဖို့သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေကြေးရှာတွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောငွေကြေးဘေးတွင် Deposit ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်၌ဤအချက်မှာသငျသညျပေးထားသောပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာမှထောက်ပြမည်ကိုသတိပြုပါ။
သငျသညျယခုသတ်မှတ်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာရန်သင့်ရန်ပုံငွေများပေးပို့နှင့်နောက်ဆုံးတွင် cryptocurrency ကုန်သွယ်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်။ Binance အားလုံးအဓိက cryptocurrencies အဖြစ်မြောက်မြားစွာကနဦးအကြွေစေ့ဟာယပူဇော်သက္ကာနှင့်သူတို့၏တိုကင်ထောက်ခံပါတယ်။
သငျသညျဖလှယ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်အပေါ်အခြေခံနောက်ခံရှိသလား ဟုတ်ကဲ့လျှင်, အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ် Binance သင်တို့အဘို့အခက်ခဲဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီအဆင့်မှာကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ပြီးသားငွေကြေးထောက်ပံ့ကြယူဆ Binance ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းကဆွေးနွေးမှုများအတွက်အသေးစိတ်အဖြစ်အကောင့်များနှင့်ပြီးသားသင်နှစ်သက်တဲ့ cryptocurrency ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကသင့်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက် menu ကိုမှာ EXCHANGE ကို click ရန်ဖြစ်ပါသည် Binance ဒိုင်ခွက်။ သငျသညျ BASIC သို့မဟုတ် Advanced ကုန်သွယ်မြင်ကွင်းအကြားကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
Next ကိုသင်ထိုကဲ့သို့သော USDT, BNB, ETH နှင့် BTC အဖြစ် cryptocurrencies ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသင့် screen ၏ညာဘက်ခြမ်းမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အတူကုန်သွယ်မှုပေးသောငွေကြေးကိုကိုရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျသင်နှစ်သက်တဲ့ cryptocurrency ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ကုန်သွယ်အားလုံးအတွက်များစာရင်းကိုပြသပါလိမ့်မည်။ စာရင်းကိုပြသသည်အဘယ်မှာရှိဤအချက်မှာ, သငျသညျအခွားသော cryptocurrency ပြောင်းသို့မဟုတ်သင့်နဦးရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
သငျသညျကို log in နဲ့အခါတိုင်းရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအသုံးဝင်သောအစွန်အဖျားရိုးရိုးလာမယ့်သူတို့ကိုရန် "ကြယ်ပွင့်" icon လေးပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် cryptocurrencies ၏သင့်ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတွင်သင်သည်သင်နှစ်သက်တဲ့ cryptocurrency ရွေးကောက်တော်မူပြီဟု, သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်ကော်လံရန်သင့်အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကော်လံကိုရောင်းဝယ်ခြင်းစျေးနှုန်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအသင်နှစ်သက်တဲ့ငွေကြေးများအတွက်စျေးနှုန်းများမရရှိနိုင်ပါပြသထားတယ်။
လုပ်ဖို့ Next ကိုအရာသည်သင်၏ဝယ်နိုင်ရန်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝယ်ယူရောင်းချ boxes တွေကိုကြည့်ဖို့တိုက်ရိုက်ဂရပ်များအောက်ရှိအပိုင်း scroll ပေးပါ။
သင့်အနေဖြင့် "ဝယ် box ကို on" input ကိုသင့်စျေးဝယ်သူစျေးနှုန်းနိုင်ပါတယ်။ အများစုကရှေးရိုးစွဲကုန်သည်များရိုးရှင်းစွာဘယ်ဘက်လက်ကော်လံပေါ်မှာပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးထား, တစ်ခုခုကိုသင်ကမဝယ်သို့မဟုတ်သင့်ရရှိနိုင်ရန်ပုံငွေများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးငွေပမာဏ Auto-ဖြည့်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်ငွေကြေးပမာဏကိုဖြည့်နေကြသည်။
သင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အပိုင်း၌သင်တို့၏အမိန့်ရှုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကသင်၏အမိန့်ကိုအောင်မြင်စွာထားရှိခဲ့ပါသည်ဆိုလိုသည်။ ပြီးတာနဲ့မပြည့်စုံကသိုက် / ရုပ်သိမ်းရေး menu ကတဆင့်သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအပိုက်ဆံအိတ်မှဆုတ်ခွာများအတွက်ရရှိနိုင်၏။ ကမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်အခြားသူက "ပွင့်လင်းအမိန့်" အပိုင်း၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။
Binance ထိုကဲ့သို့သော Dash, ဂယက်ထ, Neo, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီး (Bitcoin ၏အောင်မြင်မှုကိုပြီးနောက်အခြားရွေးချယ်စရာ cryptocurrencies စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့် Altcoins ဟုခေါ်ကြသည်) အဖြစ် Altcoins ထောက်ခံပါတယ်။
နှင့် (ကနဦးအကြွေစေ့ဟာယပူဇော်သက္ကာမြှင့်တင်ရန်ICOs), Binance လည်းတိုကင်များစွာသောလူထောက်ခံပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်အတော်လေးအမြတ်အစွန်းဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်သောဤတိုကင်ပေါ်ကုန်သွယ်မှုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
Binance ကနဦးအကြွေစေ့ရာပူဇော်သက္ကာ (ICO) မှတဆင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြွေစေ့တွေစတင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြွေစေ့ထဲမှာငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Binance ပလက်ဖောင်း။ ဒီကိုဝယ်ခြင်းငှါအကျိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် Binance ထဲမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြွေစေ့ Binance ပလက်ဖောင်းကစျေးနှုန်းချိုသာခေတ်ရေစီးကြောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဲ့သို့သူတို့ကိုသုံးပြီးကုန်သွယ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်။
ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် Binance သောဖြန့်ကျတ်လဲလှယ်ကိုဖန်တီးရန်စီစဉ် Binance တိုကင်နံပါတ်ကျိန်းသေအဆိုပါတိုးမြှင့်မည်သည့်အရေးပါသောအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးအဖြစ်တည်လိမ့်မည် Binance အကြွေစေ့ရဲ့တန်ဖိုး။
သြဂုတ်လ 2018 စဉ်အတွင်း Binance စီစဉ်ထားကျတ်လဲလှယ်တဲ့သရုပ်ပြဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ဒီစက်တင်ဘာလ, Binance CEO ဖြစ်သူ Changpeng Zhao နှင့်ကြောင်းထုတ်ဖော် Binance'' s ကိုကျတ် cryptocurrency လဲလှယ် Q1 2019 နေဖြင့်ဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်။
Binance ပလက်ဖောင်းက၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပျှမ်းမျှနှုန်းကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦး 0.1% အခကြေးငွေအားသွင်းပေးပါတယ်။ သငျသညျ BNB အတွက်ပေးဆောင်လျှင်သင့်ရဲ့ပထမနှစ်တွင်တစ် 50% လျှော့စျေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲနှစ်များအတွင်းတစ်ဦး 25% လျှော့စျေး (ရှိပါသည်Binance တိုကင်နံပါတ်) ။
ဆုတ်ခွာအခကြေးငွေအောက်မှာ Binance ပလက်ဖောင်းငွေကြေးတလွှားကွာခြားကြတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အခကြေးငွေအားဖြင့်တရားစွဲဆို Binance ပလက်ဖောင်းယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
Binance ငွေပမာဏသည်အသုံးပြုသူများအပေါ်ကန့်သတ်စိစစ်အတည်ပြုသင့်ရဲ့အဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသည့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်နေရာ။
1BTC ၏ 2BTC နှင့် level2နေ့စဉ်ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်များ၏အဆင့် 100 နေ့စဉ်ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်။ အဆင့်2အတွက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအသုံးပြုသူများ 100BTC ဘာသာရပ်၏ set နေ့စဉ်ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဖို့ option ကိုပေးအပ်ထားတယ် Binance ခွင့်ပြုချက်။
ဒါဟာ၏အသုံးပြုသူများသည်အကြားဘုံသဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ် Binance ဒါဟာသော်လည်း Multi-tier လုံခြုံရေးမူဘောင်ရှိကြောင်းပလက်ဖောင်း
ဒါဟာဟက်ကာများနှင့်အခြားဆိုက်ဘာရာဇဝတ်ကောင်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေဆုံးရှုံးအသုံးပြုသူများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုငျသောနှစျခု-Factor authentication ကိုတစ်ဦးရှေ့မှောက်တွင်ရှိကွောငျးကိုသတိပြုပါရန်ကောင်းလှ၏။
ဆက်သွယ်ရန် Binance ဖောက်သည်အထောက်အပံ့နှင့်ဖိုင်တိုင်ကြားမှုများ, အသုံးပြုသူများက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာထောက်ခံမှု form မှာဖြည့်ရပေမည်။
တုံ့ပြန်ချက်သို့သျောဤတိုင်ကြားချက်အပေါ်အဖြစ်သာကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်လက်ခံရရှိထားပါသည် Binance ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။
သို့သော်ပြည့်စုံမကြာခဏအပိုင်းအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်မေးခွန်းများကိုမေးလျှင်, Binance အသုံးပြုသူများသည် '' အသုံးချဘို့ပလက်ဖောင်း။
လက်ရှိဖလှယ်မှုများ၏အများဆုံးမတူဘဲ, Binance ကုန်သည်များ Bitcoin, Ethereum နှင့် Litecoin တူသောအဓိကငွေကြေးကန့်သတ်မထားနိုင်အောင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါမြန်နှုန်းမှာ Binance ၎င်းတို့၏ကနဦးအကြွေစေ့ဟာယပူဇော်သက္ကာ (ICOs) မှတိုကင်များနှင့်ဒင်္ဂါးပြားကထပ်ပြောသည်။ ဒီကတဆင့်အသုံးပြုသူများထို့နောက် A မြင့်ဆုံးအမြတ်အစွန်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်တစ်အများကြီးစျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာအစောပိုင်းနှင့်ဝယ်အတွက်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။
ကုန်သွယ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေအပေါ်ကြီးမားအထူးလျှော့စျေးသုံးတဲ့အခါ Binance ဆပ်ဖို့အကြွေစေ့။
တရုတ်, ဂျပန်, အင်္ဂလိပ်, ကိုရီးယားအပါအဝင်ဘာသာစကားများကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကို Windows, WeChat, Android နှင့် IOS ကိုအဖြစ်အားလုံးခေတ်မီကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Binance ပလက်ဖောင်းသာကန့်သတ်နှင့်စျေးကွက်အမိန့်၏မျိုးဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အများစုမှာအဆင့်မြင့်ကုန်သည်များကိုပိုမိုကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာကြိုက်တတ်တဲ့။
ယင်းအပေါ်မလုံလောက်ထုတ်ဖော်ရှိခဲ့သည် Binance အသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်ပေးရန်ပလက်ဖောင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများ။ (cryptocurrency လဲလှယ် Bithumb နောက်ဆုံး 19June 2018 hacked နှင့် $ 32 သန်းအထိပမာဏဆုံးရှုံးမှုအစီရင်ခံခဲ့သည်) ။
Tags: binance, binance desktop ပေါ်က app ကို, binance လဲလှယ်, binance အခကြေးငွေ, binance ရဲ့ login, binance ပြန်လည်သုံးသပ်, binance ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, binance ကုန်သွယ်အခကြေးငွေ, binance ပိုက်ဆံအိတ်, binance အပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖို့ဘယ်လို, binance သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, binance ကနေဆုတ်ခွာဖို့ဘယ်လို, binance လုံခြုံ, binance ဘာလဲ, binance ဘယ်မှာတည်ရှိသည်
Blau - ဒီဇင်ဘာလ 1, 2019 @ 09: 02
Ich kann noch nichts အနုတ်လက္ခဏာများသည် eo.trade sagen ဖြစ်သည်။ In the Tat, die Bedingungen zufrieden, und vor allem - alles ist gut mit dem dem Ergebnis ။
လေး - တဦးတည်း =